युवाहरुको क्षमता अभिवृद्धिमा विशेष काम गर्दै आएको छु : वराल-Setoghar
सुवास चन्द्र बराल सभापति पदका प्रत्याशि, नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसन (३ नम्बर प्रदेश), लाेकतान्त्रिक समूह
नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनको यस पटकको निर्वाचनमा नम्बर प्रदेशको सभापतिको रुपमा उम्मेदवारी दिनुभएको छ, यो निर्वाचनमा तपाईंले किन उम्मेदवारी दिनुभयो ?
नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसन नेपाल भित्र र बाहिर रहेका आम इन्जिनियरहरुको हक, हित र अधिकारको निम्ति काम गर्ने संस्था हो । नेपालमा र नेपाल बाहिर रहेका इन्जिनियरहरुको लागि आवाज उठाउने, उनीहरुको क्षमता अभिवृद्धि लगायतको निम्ति मैले पनि लामो समय देखि काम गर्दै आएको छु । नेपाल अहिले संघीयतामा गइसकेको अवस्थामा एसोसिएसनको नेतृत्व सक्षम र जागरुक युवा वर्गले लिनुपर्ने आवश्यकता महसुस भएको कारण ३ नम्बर प्रदेशबाट सभापति पदको निम्ति मैले उम्मेदवारी दिएको छु ।
नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसन अन्तरगत प्रदेशिक तवरबाट गर्र्नुपर्ने कामहरु के–के छन् ?
संघीयता हाम्रो पहिलो अभ्यास भएको कारण हामीले सबै प्रदेशमा यसका आधारहरु तयार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । अघिल्ला कार्यकालका अग्रणी व्यक्तिहरुको पहलबाट हासिल भएका उपलब्धिको रक्षा, नयाँ योजनाहरुको निम्ति पहल, इन्जिनियरिङ जनशक्तिको व्यवस्थापन लगायतका कुराहरुमा हामीले विशेष पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि छ ।
नेपालबाट प्रत्येक बर्ष करिब ५ हजार इन्जिनियरहरु उत्पादन हुने हाम्रो अनुमानित तथ्यांक छ । यसको व्यवस्थापन समेत निकै नै चुनौतीपूर्ण रहेको छ । यसको व्यवस्थापन गर्ने कार्य, सरकारी सेवामा रहेका इन्जिनियरहरुको अवस्थामा सुधार ल्याउने कार्य लगायतका कामहरु हामीले गर्नुपर्ने अवस्था छ । नेपालका इन्जिनियरहरु कमजोर छैनन् । साथै अब आफ्नो क्षमताको आधारमा इन्जिनियरहरुले स्थानीय तहमा नेतृत्व गर्नको निम्ति पहल गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई समेत अबको नेतृत्वले उठाउनु जरुरी छ ।
कतिपय अवस्थामा कुनै काममा कमजोरी भए त्यसको दोष इन्जिनियरलाई नै दिइने गरेको पाइन्छ । समाजमा यसरी इन्जिनियर प्रति राखिने गलत दृष्टिकोणलाई अन्त्य गर्न र इन्जिनियरहरुको गरिमा कायम राख्नको निम्ति पनि हामीले पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
यस पटकको चुनाव विगत भन्दा केही फरक तवरले सञ्चालन हुन्छ कि ?
विगतमा इन्जिनियरिङ एसोसिएसन विभिन्न क्षेत्रका च्याप्टरहरुबाट मात्र सञ्चालन हुने गरे कोमा अहिले सबै जिल्ला र स्थानीय तहमा समेत हाम्रा गतिविधिहरु सञ्चालन भइरहेका छन् । यद्यपि प्रचारप्रसार अभियानमा हाम्रो मुख्य ध्यान भनेको काठमाडौं केन्द्रित नै छ ।
तपार्इंंको इन्जिनियरिङ क्षेत्रको समग्र अनुभव र योगदान बारे प्रष्ट्याइदिनुहोस् न ?
म वि.सं २०५७ मा इन्जिनियरिङ अध्ययन पश्चात् एसोसिएसनमा जोडिएर यसमा विभिन्न रचनात्मक भूमीकाहरु निर्वाह गर्दै आएको छु । एसोसिएसनका विभिन्न कमिटीहरुमा रहेर मैले काम गरेको छु । पछिल्लो समय मैले टेक्निकल कमिटीको सहअध्यक्ष भएर समेत काम गरेको छु । मेरो समेत नेतृत्व रहेको यस समितिले रिसर्च जर्नल प्रकाशन तथा विभिन्न प्राविधिक खोज कार्यहरु गर्दै आएको छ ।
वि.सं २०७२ को भूकम्प पश्चात् जनतामा देखिएको त्रासलाई कमी गर्नको निम्ति पनि मेरो भूमीका निकै महत्वपूर्ण रहेको थियो । तत्कालिन एसोसिएसनका अध्यक्ष धु्रवराज थापा लगायत पूर्ण समितिसँग छलफल गरेर हामीले ‘¥यापिड भिजुअल ड्यामेज एसेसटेन्ट’को नाममा एउटा अभियान चलायौं । यस कार्यक्रम अन्तरगत करिब ३५ सय इन्जिनियरहरुलाई सेवामा खटाएर भूकम्पको प्रभावमा परेको घर बस्नको निम्ति योग्य छ कि छैन भन्ने सम्बन्धी तालिम दिएर सोहीबमोजिम ऊहाँहरुलाई हामीले काममा खटायौं । घरघरमा गई जनताहरुलाई बस्न मिल्ने घरमा बस्ने र बस्न नमिल्ने घरबाट उनीहरुलाई बाहिर निकाल्ने काम हामीले ग¥यौं । यसबाट जनतामा निकै ठूलो राहत महसुस हुन गयो । यसको नेतृत्व पनि मैले नै गरेको हुँ । त्यसैगरी मुलुक पुनर्निर्माणमा जाने समयमा इन्जिनियरहरुलाई पुननिर्माण सम्बन्धी तालिम दिने कार्यको निम्ति संयोजकको रुपमा काम गरेको छु । करिब १३ सय इन्जिनियरहरुले उक्त तालिम लिनुभयो । अहिले तिनै इन्जिनियरहरु मुलुकको विकासको निम्ति निरन्तर खटिइरहनुभएको छ ।
संक्षिप्तमा तपाईं आफूलाई कसरी परिचित गराउन चाहनुहुन्छ ?
म इन्जिनियर सुवास चन्द्र बराल हुँ । अहिलेको निर्वाचनमा ३ नम्बर प्रदेशबाट सभापतिको लागि उम्मेदवारी दिएको छु । मैले वि.सं २०५७ मा सिभिल इन्जिनियरिङमा स्नातक र २०६५ मा स्नातकोत्तर तहको अध्ययन पूरा गरेको हुँ । हाल म खासगरी जलविद्युत क्षेत्रमा परामर्शदाताको रुपमा काम गरिरहेको छु । म टेक्नोलाेजी कन्सल्ट नामक कम्पनीमा आवद्ध रही यो क्षेत्रमा कार्यरत छु ।
करिब १८ बर्ष इन्जिनियरिङ क्षेत्रमा खटिने क्रममा मैले यस क्षेत्रलाई नजिकबाट बुझेको छु । मैले युवाहरुको क्षमता अभिवृद्धि, स्वरोजगारमूलक कार्य, रोजगारी सृजना लगायतको निम्ति काम गरिरहेको छु र आगामी दिनमा यि कामहरुलाई ठूलो समूहले लाभ लिन सक्ने गरी गर्न सकुँ भन्ने मेरो चाहना छ ।